Vahoaka 3000 traboina any Ambanja : Nitondra fanampiana ny Fitondram-panjakana -
AccueilSosialyVahoaka 3000 traboina any Ambanja : Nitondra fanampiana ny Fitondram-panjakana
Vahoaka 3000 traboina any Ambanja : Nitondra fanampiana ny Fitondram-panjakana
14/03/2018 admintriatra Sosialy 0
Vahoaka telo arivo mahery no traboina ao amin’ny fokontany 15 amin’ny 24 ao an-tampon’ny tanànan’ Ambanja, vokatry ny fiakaran’ny rano taorian’ny rivodoza Dumazille. Manoloana izay, tsy niandry ela ny Fitondram-panjakana tarihin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery fa naniraka ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, Solonandrasana Mahafaly Olivier notronin’ny minisitry ny Asa vaventy, ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena, ny Lehiben’ny faritra Diana, ny Préfet Antsiranana, ary ny Solombavambahoakan’i Nosy-be nijery ny zava-misy any Ambanja, ary nitondra fanampiana ho an’ny vahoaka ny alatsinainy teo. Vary 15 taonina, voamaina, fanitso arivo isa ireo no natolotry ny Fitondram-panjakana ho an’ireo traboina ka faly sy ravo ireo mpisitraka. « Faly e !! tena faly loatra izahay amin’izao fahatongavan’ny fanampiana avy tamin’ny Filoham-pirenena izao ka tena mankasitraka azy eram-po eran-tsaina izahay mponin’Ambanja fa afa-pahasahiranana tokoa. Tena dibo-drano izahay vokatry ny orambe taty ka simba avokoa ny trano sy ny fananana kely », hoy ny solontenan’ireo mponina, ramatoa Marie Josiane.
Nambaran’ny Praiminisitra Solonandrasana Mahafaly Olivier fa maharary azy ireo ny maharary ireo mponina ka antony nitondrana fanampiana ho fanamaivanana ny fahasahiranan’ireo mponina any Ambanja. « Nisy antony nahatongavanay teto. Voalohany indrindra, iraky ny Filoham-pirenena hitondra izay voatsirambin’ny tanana amin’izao fahavoazana mandalo aminareo eto. Misy kaominina 15 no anatin’ny rano, ary maro ny very fananana ka manoloana izay dia tonga eto izahay hitondra fanampiana ho anareo. Satria maharary anareo maharary anay ary raha manahirana anareo Ambanja manahirana ny Filoham-pirenena, sy ny Fitondram-panjakana rehetra ka izay no anton-dianay hanamaivana ny fahasahiranantsika”, hoy ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta. Taorian’izay nijery ny antony nahatonga ny rano be ao an-tampon-tanànan’Ambanja ny Praiminisitra sy ireo delegasiona niaraka taminy, ka nitafa tamin’ny vahoaka ny lehiben’ny governemanta. Fantatra nandritra izany fa ny tsy fahampian’ny lakan-drano sy fahatsentsenan’ireo misy no antony fiakaran’ny rano any an-toerana. Nanafatra ireo tompon’andraikitra ny praiminisitra avy eo, amin’ny tokony hijerena tsara ny mahakasika ny fanorenana trano amin’izao fotoana izao. “Misy ny tsy fanarahan-dalàna. Misy ny olona minia manorina trano eo amin’ny lakan-drano handehanan’ny rano. Ka mitaona olona samy ho tompon’andraikitra, ary mijery ny fomba ahafahana mampivily ny rano mba tsy hianaka amin’ny tokontany ny olona, satria raha mipetraka foana ireo rano ireo, dia miteraka aretina, mamoaka fofona maimbo”, hoy hatrany ny lehiben’ny governemanta, Mahafaly Olivier. Manoloana ny fahalotoan’ny tanàna vokatry ny fiakaran’ny rano izay, dia hisy ny asa tanamaro amin’ny alalan’ny Fid izay hatomboka tsy ho ela mba hanampiana sy hanadiovana ny tampon-tanànan’Ambanja.
Komity karatra maha matihanina : Laharam-pahamehana ny fanadiovana